Eto'o Fils: Fadeexada qaraabadiisa ayaa ku dhawayd inay ku kallifto maalkiisa. - KU SAMEEYSAA NABADA
Eto'o Fils: Fadeexada qaraabadiisa ayaa ku dhawayd inay ku kallifto maalkiisa.
SPORTSaan caadi ahaynSharciga NovelasDADKA & LIFESTYLE
By TELES RELAY Last updated Juun 18, 2020
Halyeeyga reer Cameroon Samuel Eto'o wuxuu soo maray mustaqbal hodan ah taas oo keentay inuu ka dhex baxo Real Madrid, FC Barcelona iyo Inter Milan. Xiddiga reer Cameroon wuxuu leeyahay mid ka mid ah liisaska abaalmarinta ugu fiican kubada cagta isaga oo aruurinaya ku dhawaad ​​dhammaan koobab waa weyn. Sharafta iyo hibada ayaa ka dhigtay inuu ka mid noqdo ciyaartoyga ugu mushaharka badan dunida markii uu firfircoonaa. Sida xiddigaha badankood, Eto'o wuxuu ku aaminay maareynta maalkiisa shirkad, halkaasna ay ku noqotay dib-u-dhacyada.
Xaqiiqdi, sida ay soo weriyeen barta Sportmania, xiddigii hore ee Real Mallorque wuxuu ogaaday in wax khaldan yihiin markii hooyadiis Cameroon ay aragtay waxa uu u dirayo. Eto'o, oo sidoo kale maalgeliyey madaddaalo goob lagu caweeyo, ayaa ogaadey in sanduuqa uu dalbanayo lacag laga siiyo isaga oo wakiilkiisa, Jose Maria Mesalles ay ahayd inuu bixiyo. Ka sii darane, kan labaad wuxuu hantidiisii ​​ka beddelay shirkaddii maareysay taas oo faa'iido u ah shirkadaha kale ee shaashadda ee uu maamuli jiray. Eto'o wuxuu haystaa kaliya 1% hantideeda.
Samuel Eto'o wuxuu iimaanka indhoole ka dhigay Mesalles. Wuxuu u oggolaaday inuu iibsado, iibiyo, wareejiyo oo uu maamulo miisaaniyaddiisa. Dhamaan wixii Eto'o uu ku guuleystay, oo ah 40 milyan euro intii u dhaxeysay 2006 iyo 2009, waxaa loogu deeqay Mesalles, ”ayaa lagu qoray bogga. Isla isha ayaa tilmaamaysa in shirkada su'aasha laga qabtay ay leedahay tiro hanti dhaxal gal ah oo weerarka reer Cameroon ah. Kuwani waa "afar guri oo ku yaal Palma, Barcelona, ​​iyo Paris, oo ah dhisme dhan oo ku yaal Douala, baarkinno, bakhaarro iyo Bentley".
Ka helitaanka dheriga dusha sare, Samuel Eto'o wuxuu go’aansaday inuu soo afjaro wada shaqeyntii uu la lahaa Jose Maria Mesalles iyo in tallaabo sharci ah laga qaado isaga. Nasiib wanaag, libaaxa aan sugnayn ayaa dib u helay nasiibkiisii ​​wuxuuna ka fogaanayaa in lagu daro liiska dheer ee ciyaartoydii burburay dhamaadka shaqadoodii.
Xirfadda hibada: doodda Ego ee u dhaxeysa Samuel Eto'o iyo…
Samuel Eto'o oo rasaas nool ku furay El-Hadji Diouf!
Samuel Eto'o: CAN2021 waxa ay mari doonaan taariikh wareeg ah
isha: https://www.afriquesports.net/football/escroque-samuel-etoo-a-frole-la-faillite-a- sababta-de-ses-proches
Muujinta: sirta hantida weyn ee Harry iyo Meghan Markle
Jean Pierre Bekolo wuxuu ugu yeeraa dadka reer Kamroon inay doortaan dhinacyada u tartamaya isku xigxiga
Novelas: FATMAGÜL XUQUUQDA EPISODE 49: Mustafa inta u dhaxeysa Nolosha iyo Dhimashada - Fiidiyow